12 Tricks mba hitantana Services Cloud Plus | NY
Mitantana raharaham-panompoana maromaro - DevOps
Tsy misy mpividy rahona iray manana ny valiny tsara indrindra ho anao amin'ny iray amin'ny toe-draharaha tsara fanahy. Ny fomba tsara indrindra hampitomboana ny tombontsoa azon'ny raharaham-barotry ny rahona amin'ny raharaham-barotrao dia amin'ny fitantanana rahampitso mpaninjara vitsivitsy ary ny fanamarinana ny iray amin'izy ireo amin'ny fotoana rehetra. Izany no mety ho antsoina hoe mihira aria rehefa mitoetra eo an-dohanao sy mamakivaky atody. (Tsy amin'ny endriky ny fisainana, na izany aza, dia mety hipoitra izany.)
Ireto ny zavatra 12 tokony hotsaroana rehefa mandamina ny fomba amam-panaon'ny raharahan'ny fikambanana:
Apetaho ny rafitra manontolo, ary aorian'izany dia manavaka ny toerana misy ny rahona:Maka sary an-tsaina ny ampahan'ny rahona amin'ny fomba fitantanana ankapobeny ny fifanakalozan-kevitra mba tsy hialana amin'ny fametrahana tsipika amin'ny filàn'ny informatika sy ny mpanjifa samihafa. Ny varotra isan-karazam-barotra isan-karazany dia tsara indrindra ho an'ny mpamatsy rahona samihafa.
Miaraha miasa amin'ny mpivarotra izay mihetsiketsika haingana sy mazava tsara amin'ny tsy ampoizina. Hisy toe-javatra tsy ampoizina amin'ny toe-javatra misy anao rehefa miaraka amin'ny fitantanana rahona maromaro. Ny mpiray tsikombakomba aminao dia tokony hitatitra araka ny tokony ho izy ny fitantanana, ny fanavaozana ary ny singa vaovao.
Fenoy ny fanaraha-maso sy fanohanana ambany. Ny fanazavana roa manan-danja ao ambadiky ny fanarahamaso ny raharaham-boho rahampitso dia ny vola lany vola sy ny fahaiza-manao tsara kokoa. Ny fomba iray hanatanterahana ny roa dia ny fampihenana ny fepetra takian'ny olombelona hitakiana ny fimenomenonanao.
Ny endri-tsoratry ny fitantanana ny rahona marobe dia miseho eo amin'ity drafitr'asa ity izay mampiditra ireo singa maro izay tokony hohiraina tanteraka. Misy marika maromaro amin'ireo asa goavam-be ireo dia tsy maintsy manamboatra ny paikady. Loharano: Carl P. Lehrmann, Fikarohana 451
Raiso rehefa ny mpanjifanao. Diniho tsara ny fomba iantsoana ny "mpividy" ny fampiharana sy ny rafitra anao amin'ny fametrahana ireo fitaovana ampiasaina. Izy ireo no toro-hevitra tsara indrindra izay fomba fiasa no tena lehibe indrindra. Azonao atao koa ny mamantatra ireo fitantanana vaovao izay hitan'ireo mpanjifa izay manampy azy ireo hamita ny asa vitany haingana kokoa, izay tsara sy mahasoa kokoa noho izany. Izany dia manome fahafahana anao hividy hopitaly momba ny karazana fitaovana kasaina hotanterahina any aoriana.
Vola roa amin'ny fanaraha-maso. Tsy afaka mifehy izay tsy hitanao ianao. Ny fitantanana mpivarotra maromaro dia mampifangaro ny paikady handaminana governemanta vaovao. Mba hisorohana ireo sakana tsy ilaina amin'ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitry ny fitantanana vaovao vaovao, dia mamolavola fividianana fividianana izay mety ho azo ampiharina amin'ny fitondram-panjakana. Na dia izany aza, tsy ela taorian'ilay fitantanana manokana ny ora voalohany amin'ny alina, dia manombatombana raha toa ka ho voamarina ny fitantanana vaovao tsirairay na inona na inona ny vidiny ary na tsara kokoa aza ny safidinao, na tsy misy vidiny aza.
Ny fitohizan'ny fiainana an-tserasera dia mitohy mitarika ny hetsika rahona. Ny toeram-piompiana orinasa dia mety hiverin-dàlana, saingy tsy azo lavina izy ireo. Ho an'ireo antony fantatra amin'ny fiarovana, ny fisian-tsika, ny fiarovana, ary ny isa isan-karazany dia misy rafitra maromaro sisa tavela ao an-trano mandritra ny taona maro ho avy. Mila miezaka mafy ianao mba hisintona sy handefa fampiharana any anaty ala, indrindra fa iray na roa na telo taona monja ary tsy mbola nandoa ho an'ny tenany mihitsy. Raha vao miomana ny handinika indray ny sehatra iray dia tsy dia mitaky firy amin'ny fiarovana ny raharaham-barotra ho an'ny rahona-local.
Manaova ny hery mialoha emptable milina virtoaly. Satria mbola manohy tsy manoatra noho ny ora 24 izy ireo, ny VMs azo avaozina dia fanapahan-kevitra mendrika ho an'ny fifehezana ny fifehezana sy ny fametrahana fandriam-pahalemana, araka ny filazan'i Matthew Cooter ao amin'ny ComputerWeekly ao amin'ny lahatsoratra 2016 novambra. Ireo VMs azo alaina dia mihoatra ny 80 isan-jato faran'izay sarotra noho ireo ohatra mahazatra ao amin'i Google, ary ny lanjany voajanahary dia manampy ny fikambanana handamina sy hiatrehana ny fandanian'izy ireo.
Manajà ny rafitra fanamafisana ny rafitr'asa fitantanana voatokana ho an'ny toe-draharaha virtoaly. Ity no fomba tsara indrindra ahafahana miantoka ny servera, ny fitahirizana, ny fikarakarana, ny fiarovana, ny asa ary ny antotan-tsarimihetsika dia miara-miasa amin'ny tarika tokana amin'ny tanjona iraisana, araka ny filazan'i Jay Litkey, filoha sady tompon'andraikitry ny orindraharaha manokana momba ny rahona Embotics, tamin'ny Novambra 21, 2016, lahatsoratra ao amin'ny gazetiboky Virtual Strategy. Ny fikambanana rehetra mikarakara ny fetra ara-batana ara-batana ara-batana dia tsy maintsy miady amin'ny hetsika mba hiatrehana ny zaridaina sy ny toe-javatra marobe.
Manavaka ireo fampiharana ao amin'ny fikambanana misy anao dia tena tsara indrindra amin'ny fampiasana rahona eo an-toerana. Ny fampiharana ara-tsiansa dia matanjaka, mitazona hatrany amin'ny VMs, mampiasa fitaovana fanitarana fanitarana ary dia mazàna no sarotra kokoa ny mamorona, mandefa ary manohy. Amin'ny alàlan'ny fanavahana, ny fampihetseham-peo momba ny rahona dia manjavozavo ary ny fitantanana dia misy ny fanangonana ny efi-trano sy ny fitantanana, eo am-pandinihana ny famolavolana paikady, ary tsotra mba hamolavolana, hivoatra ary ny lanjany.
Mifantoka amin'ny fampiharana ao amin'ny fikambananareo izay hahasoa ny ankamaroan'ny fomba fitadiavana rahona, ary hanatrika ireo izay tena ilaina amin'ny fikarakarana amin'ny sehatry ny fitrandrahana seriver mahazatra. Loharano: TechTarget
Amboary ny fangatahanao amin'ireo fitantanam-panjakana izay milalao ny toetrany. Betsaka ny fitantanana ny anarana, ohatra, ny VMware sy ny AWS dia samy manana ny toerany mba hanomezana fahafaham-po ny filàna samihafa amin'ny mpanjifany. Ohatra, ny VMware vSphere-based Enterprise Hybrid Cloud dia andrasana amin'ny fampiharana mahazatra, ary ny Cloud Native Hybrid Cloud fandaharam-potoana dia natao handraisana rafitra, mikroservice. Amin'ny ankapobeny, ireo orinasam-pifandraisana EFS, ny Elastic Block Store, ny rafitry ny dokotera EFS sy ny rafitry ny private VPC dia mirona amin'ny toeram-pambolena serivisy ao anaty trano, raha ny fanampim-panazavozana dia manangona vola bebe kokoa ny fitantanana ny vola, ohatra ny databases NoSQL, ny fikarakarana BI, ny banga hadoop, hafatra tsipika, manara-maso ny fitantanana ny fampahalalam-baovao, mpanodina mediam-baovao sy endriky ny tranonkala.
Manamboara fandaharana mifanandrina amin'ny rahona. Ny fomba tsara indrindra hampiasana ny fampiasana ny rahona matevina maro dia ny hanana fenitra tokana ho an'ny fandaharana izay mifandray amin'ny tontolo iainana. Ny fomba fijery dia manarona ireo sehatra toy ny servisy virtoaly, ny fiasan'ny asa, ny fanangonana vaovao, ny fizotran'ny asa, ny fisorohana / ny fanaraha-maso, ny tatitra sy ny fiarovana. Tsy dia mitaky ny fampiharana sy ny fanovana ihany koa izany raha manana rafitra tokana mifanohitra amin'ny rafitra samihafa, mifanaraka amin'ny zava-misy fa ny fandrosoana dia miteraka tsy misy dikany avy amin'ny tontolo iainana.
Ny mpivady ara-dalàna dia lasa mifamatotra amin'ny fotoana lavareny. Raha miankina tanteraka amin'ny rahona misokatra iray ianao, dia mety ho sarotra ny hamindra ny milina virtoaly sy ny fananana hafa amin'ny fitantanana hafa. Anisan'ireo singa handinihina ireo dia mihevitra / manangona entana, filàna fifanakalozam-baovao ary ny tsy fisian'ny rafitra. Amin'ny fiankinan-doha amin'ny fampiasana ny raharahan'ny rahona rahampitso, izay rehetra manana tetikady sy tetikasa, dia manosika anao hiatrika ny fiovana fa tsy ny fiovana miandraikitra anao.